Iindaba - Iimpawu zokonga umbane kunye nokusingqongileyo-friendly kiln lime
Iimpawu zokonga umbane kunye nokusingqongileyo kwi-lime kiln
Iziko elime nkqo kwikalika libhekiselele kwisixhobo sokwenza ikalika ukukhupha iklinka ngokuqhubekayo kwinxalenye esezantsi yesondlo esiphezulu. Ibandakanya umzimba othe nkqo we-onti, ukongeza kunye nokukhupha isixhobo kunye nezixhobo zokungenisa umoya. I-oven ye-coke ethe nkqo, i-oven ethe nkqo yamalahle inokohlulwa ibe zezi ntlobo zine zilandelayo ngokwezibaso: i-oven ye-coke ethe nkqo, i-oven yamalahle eme nkqo, i-oven emi nkqo ye-fuel kunye ne-gas. I-advanteji ye-kalika ye-kalika ethe nkqo kukuba utyalo-mali oluncinane, indawo ephantsi yomgangatho ophantsi, ukusebenza kakuhle okuphezulu, ukusetyenziswa kwamafutha aphantsi kunye nokusebenza lula.
Ikalika evuthiswa yi-kiln eyonga amandla kunye neyokusingqongileyo ayiyomgangatho ophezulu kuphela, kodwa ibaluleke kakhulu. iyunifomu kwaye izinzile, kunye nomsebenzi ophezulu we-lime kunye nomxholo omuhle we-calcium. Namhlanje siza kufunda malunga neempawu zokonga umbane kunye neziko lokusingqongileyo.
1) Ngenxa yokuba izinto ziqengqeleka phambili ngokufanayo kwihonti yekalika, iphezulu kwaye ikwimeko entle yokusebenza, ebonelela ngesiqinisekiso kumashishini afana neplanti yentsimbi ukwandisa isikali kunye nokunciphisa iindleko zemveliso.
2) Iqondo eliphezulu lokuzenzekelayo, inkqubo yokulawula kude, abantu abambalwa banokusebenza umgca wonke.
3) Umgangatho wemveliso efanayo.
4) Ihonti yekalika ethe nkqo yindlela yokubala evulekileyo, inkqubo yokuvelisa ubugcisa obuphezulu, ukusetyenziswa kwamandla okuphantsi ngokwentelekiso kunendlela yakudala yehoko yekalika, kwaye inokusebenzisa inkunkuma yokuqhumisa irhasi yomlilo njengesibaso esilukhuseleko olungaphezulu kokusingqongileyo.
I-5)Inkqubo ezenzekelayo kunye neyemanuwali zombini zixhotyiswe. Ngaphandle kokusebenza kwencwadana yebhokisi yokusebenza kwisayithi, zonke zinokulawulwa ngokusebenza kwekhompyutheni kwigumbi lokulawula eliphakathi.
6) Idatha yazo zonke izixhobo (ezifana ne-gauge yoxinzelelo, i-flow meter, isixhobo sokushisa) iboniswa kwikhompyutheni kwaye inokuprintwa ngumshicileli.
I-7) Gqibezela i-Siemens ehlakaniphile yokulinganisa imodyuli batching, inkqubo yokulinganisa kunye nembuyekezo.
8) Iigeyiji zenqanaba lemathiriyeli ye-lime kiln ethembekileyo, iinkosi ezihlakaniphile kunye nezinye izixhobo zobunini.
I-9) I-automatic kunye ne-manual system zombini zixhotyiswe. Ngaphandle kokusebenza kwencwadana yebhokisi yokusebenza kwisayithi, zonke zinokulawulwa ngokusebenza kwekhompyutheni kwigumbi lokulawula eliphakathi.
Ixesha lokuposa: May-25-2020
Ukwenza iCalcium Hydroxide, I-Calcium oxide esetyenziswa kwezoLimo, Ukwenza iCalcium Hydroxide, ICalcium Hydrooxide Processing, Izixhobo zokuLungisa iCalcium Hydroxide, ICalcium oxide Production Line,